News | Tag: power
जिल्लामा सीडीओ नै शक्तिशाली, यस्ता छन् प्रस्तावित अधिकारः
काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीमा पनि केन्द्रीकृतमा जस्तै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) शक्तिशाली हुने गरी कानुन तर्जुमाको गृहकार्य अघि बढाइएको छ। जिल्लामा विभिन्न कारणले शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिए र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए आदेश दिने अधिकार सीडीओमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
गोप्य रुपमा विश्व नियन्त्रण गर्ने यी १० परिवार !
एजेन्सी । ग्यालपद्वारा १३४ मुलुकमा हालै गरिएको मत सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत मानिस मात्र ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाको पक्षमा थिए । यो आँकडा बाराक ओबामाको राष्ट्रपतित्वकालयता करिब २० अङ्कको गिरावट हो ।
काठमाडौँ, २६ माघ । बुटवल पावर कम्पनीले आह्वान गरेको थप निष्काशन (एफपिओ)मा मागअनुसारको आवेदन नपरेपछि संस्थागत लगानीकर्ताले पनि शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वका १० शक्तिशाली सैन्य बल भएका राष्ट्रहरु
ग्लोबल फाएरपावरका अध्ययनकर्ताले विश्वका शक्तिशाली सैन्य बल भएका १० राष्ट्रहरुको सूचील प्रकाशन गरेको छ । सन् २०१५ को तथ्यांकमा आधारित भएर उक्त सूची तयार गरिएको ग्लोबल फाएरपावरले बताएको छ ।
स्थानीय सरकार कहिले सक्रिय हुने ?
काठमाडाैं, मंसिर १९ । निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएको सात महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तह कमजोर बनेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको भनाइ छ।
यी हुन् विश्वकै शक्तिशाली परिवारहरू, यस्ताे छ रबाफ
बिर्सने बानीले दिक्क हुनुभएको छ ? स्मरण शक्ति बढाउन नियमित खानुहोस यस्ता ७ चिज
बढ्दाे उमेरसँगै मानिसहरुकाे स्मरण शक्ति कम हुँदै जान्छ र बिर्सने बानीले समस्यामा पार्न थाल्छ । तर, हामीले केही यस्ता खानेकुरालाई नियमित खाने गरेमा याे समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्छाैं ।
यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली १० देशः कुन देशको सैन्य क्षमता कति ?
एजेन्सी–ग्लोबल फाएरपावरका अध्ययनकर्ताले विश्वका शक्तिशाली सैन्य बल भएका १० राष्ट्रहरुको सूचील प्रकाशन गरेको छ । सन् २०१५ को तथ्यांकमा आधारित भएर उक्त सूची तयार गरिएको ग्लोबल फाएरपावरले बताएको छ ।
युद्धको संघारमा रहेका चीन र भारतको सैन्य क्षमता कसको कति ?
एजेन्सी । पछिल्लो समय डोकलामलाई लिएर भारत र चीन युद्धको संघारमा रहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो देशको तागत कति छ यसबारे पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने ट्रम्पको निर्णय गैरकानुनी
स्वीट्जरल्यान्ड, माघ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार प्रमुख जैयद विन राद जैयद अल हुसैनले अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा अमेरिका भ्रमणमा खासगरी इस्लामिक मुलुकका विदेशीलाई लक्षित गरी लगाइएको प्रतिबन्ध गैरकानुनी भएको बताएका छन् ।
अब पैतिस वाट विद्युतबाट नै कम्युटर चल्ने, नेपालीले गरे आविस्कार
काठमाडौँ, ३ पुस । कुनै पनि कम्युटर चलाउनका लागि २६० वाट बिजुलीे आवश्यक पर्छ, तर नेपालका कम्युटर वैज्ञानिक मुनिबहादुर शाक्यले ३५ वाट विद्युतबाट चल्ने कम्युटरको विकास गरेका छन् ।